Igwe okwu ọkà okwu IKEA SYMFONISK, ụda ka mma yana imepụta ihe | Akụkọ Ngwa
Igwe okwu ọkà okwu IKEA SYMFONISK, ụda ka mma yana imebe ya karịa [Nyocha]
Miguel Hernandez | 04/08/2021 15:00 | General, Nyocha
IKEA, Dịka ị nwere ike mara nke ọma n'ihi na anyị ewetala ụfọdụ nyocha ụdị ngwaọrụ a, ọ nọwo na -arụ ọrụ ogologo oge dịka Sonos, ụlọ ọrụ North America ọkachamara na ụda nwere ọgụgụ isi na ikuku. N'ụzọ dị otú a, ndị Sweden na ndị America emepụtala ngwaahịa ọhụrụ na -ejikọ nke kacha mma nke IKEA na teknụzụ kachasị mma. adịchaghị de Sonos.
Anyị na -enyocha okpokoro okwu IKEA SYMFONISK na mmekorita ya na Sonos, nnukwu mmali dị mma na ike, akara ụlọ.. Chọpụta anyị nyocha miri emi nke ngwaọrụ a na-ejide ọtụtụ anya.
Dị ka ọ na-adị mgbe niile, anyị na-eso vidiyo a site na ọwa anyị YouTube, n'ime ya ị ga -ebu ụzọ nwee ekele igbe mbupu zuru oke yana usoro nhazi, nke dịka ọ na -eme na ngwaọrụ Sonos dị mfe. Were ohere ịdenye aha wee hapụ anyị echiche gị ma denye aha, naanị mgbe ahụ ka anyị nwere ike ịga n'ihu na -ewetara gị ngwa kacha mma na Actualidad Gadget.
1 Akụrụngwa na imewe: IKEA karịa Sonos
2 Ụda: Sonos karịa IKEA
3 Njikọta na njikwa ojiji
4 Ahụmahụ na echiche nke Editor
Akụrụngwa na imewe: IKEA karịa Sonos
Nleba anya mbụ n'ịkpọghe igbe ma anyị ghọtara na IKEA haziri akpa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị maka ngwaọrụ a, ọ bụghị ihe ijuanya, igbe ya buru ibu. N'agbanyeghị ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya, opekata mpe n'ime nkwakọ ngwaahịa, ọ na -egosi na Sonos emela ihe ya na ahụmịhe ahụ dị ka nke ngwaahịa ya ndị ọzọ. Ozugbo anyị nọ n'èzí, anyị nwere igwe okwu nke na -eju anyị anya na ịdị gịrịgịrị na nha ya dị mma: 41 x 57 x 6 sentimita. USB na -emesapụ aka na a na -ekele ya, mita 3,5 n'ogologo ka anyị wee ghara inwe nsogbu njikọ, na mgbakwunye, ọ bụ nylon a kpara akpa.
O doro anya na ọ dịkwa ntakịrị, yana A na -agbakwụnye igbe nwere ngwa dị iche iche ka anyị nwee ike idobe ya, jiri ụkwụ silicone, njikwa nylon ma ọ bụ ozugbo anyị nwere ike tinye ya na mgbidi dịka a ga -asị na ọ bụ eserese. Anyị nwere ike zụrụ ya na nsụgharị abụọ, otu na -acha ọcha / isi awọ na nke ọzọ na oji / isi awọ, ha abụọ nwere otu atụmatụ na ihu nke ihu ihu, mana agba na -atụgharị. Banyere ịkwụgide ya n'elu mgbidi, anyị ga -ahụrịrị nkwụsi ike ya, maka na ụda dị mma nke na ikekwe anyị enweghị ike.
Anyị na -elekwasị anya na ogwe, nke a na -atọkwa ụtọ. Site na ụfọdụ oghere azụ anyị nwere ike pịa ịwepụ akwa ahụ wee nweta ndị na -ekwu okwu SYMFONISK a ozugbo. Maka ugbu a IKEA na -enye anyị ohere nke nweta ụdịdị iri na abụọ dị iche iche na webụsaịtị ha na site na ya nke ụlọ ahịa anụ ahụ ya na ọnụ ahịa ga -adị n'etiti euro iri na isii nke ụdị dị ọnụ ala yana euro 16 nke ndị ọzọ niile na -eri. Nhazi nke ụdị dị iche iche na maka ụtọ, ị mara, agba. Dochie ha, dịka ị hụla, dị oke nfe yana ọ bụ otu n'ime isi ihe na -atọ ụtọ ya.
Ụda: Sonos karịa IKEA
Ọ bụrụ na ngwaahịa mbụ nke mmekorita Sonos na IKEA ahapụlarị ụtọ dị mma n'ọnụ anyị, nke a akarịala ihe anyị tụrụ anya ya. Ọ dị nwute na anyị enwetabeghị njirimara teknụzụ, agbanyeghị, n'ịhụ oke ọkpụrụkpụ anyị tụrụ egwu nke kacha njọ. Akwụpụrụ egwu anyị, Sonos achọpụtakwala anyị ọzọ na enwere ike ịme anwansi. Ngwaọrụ anaghị ama jijiji na ụda dị ala, ụda na -agbanwe agbanwe, oke ya dịkwa oke ịtụnanya.
Ka ị wee nweta echiche n'ogo ntụnyere, anyị na -enweta nsonaazụ dị ike karịa Sonos One ọdịnala. N'agbanyeghị nhazi ya, ọ naghị ama jijiji na mgbidi ma ọ bụ na -enye ụda gbajiri agbaji. Na mgbakwunye, ọ na -akwado Sonos 'Trueplay smart audio protocol.
Njikọta na njikwa ojiji
Ọ dị mkpa ka ị budata ngwa Sonos, dị maka ha abụọ iOS dika android kpam kpam n'efu. N'ebe a, ị ga -enwe ike hazie ngwaọrụ gị ngwa ngwa:
Jikọọ ya na ike wee chere ka ọkụ ọkụ na -achawa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Mepee ngwa Sonos wee nabata arịrịọ ikike
Họrọ ngwaọrụ Sonos SYMFONISK wee nabata njirimara
SYMFONISK ga -ada ụda na ngwa ga -ejikọ ya
Ugbu a ị nwere ike chere maka mmelite
Ị nwere ike ịmekọrịta ọrụ ọdịyo gị ma kpọọ ọdịnaya gị niile
N'ime otu bezel anyị nwere ike ịnweta bọtịnụ atọ, nke a ga -egwu / kwụsịtụ na iji mgbata ugboro abụọ ga -aga n'ihu egwu wee jiri mgbata ugboro atọ ọ ga -ala azụ, yana bọtịnụ iji jikwaa olu. Maka ndị nwere ogbenye WiFi (anyị na -akuziri gị idozi ya n'ụzọ dị mfe) nwekwara ọdụ ụgbọ mmiri RJ45 Ethernet.
N'ime nyocha ndị ọzọ, anyị na -eche Sonos ihu na iwu niile, nnweta Spotify Jikọọ, sistemụ ọtụtụ ụlọ na ọtụtụ ọrụ ọdịyo na -enuba. N'otu ụzọ ahụ, Enwere ike ịnweta ya site na Apple HomeKit's AirPlay 2 protocol na n'ezie, yana nkedo IKEA nke sistemụ ụlọ ejikọtara. Anyị enweghị ee, yana igwe okwu na -enye ohere mmekọrịta na Alexa, Google Home ma ọ bụ Siri, ihe gaara eme nke a ka ọ bụrụ ngwaahịa gbara gburugburu.
Ahụmahụ na echiche nke Editor
SYMFONISK a sitere na IKEA na Sonos tụrụ m n'anya n'eziokwu. Agbanyeghị na ọ bụghị ọnụ ala, ọ dị ihe dịka euro 199, ọ na -enye ụda dabara na ngwaahịa Sonos nke dakọtara na dịkwa ọnụ karịa. Nke a pụtara na edobere ya nke ọma nwere ike bụrụ ezigbo enyi n'ọfịs, ime ụlọ na ọbụna n'ime ụlọ, ebe enwere ike iji ha na ọnọdụ "stereo".
Ụda dị ezigbo mma, karịa ka a tụrụ anya maka ngwaahịa IKEA, na -emezi oke ma ọ bụrụ na enwere ike SYMFONISK ruo ebe anyị na -atụghị anya ya. Ohere nke ịgbanye ogwe dị iche iche na -akpọ anyị oku ka anyị mepụta ụdị nke anyị ma mee ka ọ dịrị mkpa anyị, ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ime ụdị ihe ahụ, nke ahụ bụ Swedish IKEA. Ọ bụ ngwaahịa nke m ji ezi obi na -atụ aro tupu ụlọ elu ụda na -agwụ ike nke na -eso ụlọ nke ndị nọ n'afọ iri na ụma anyị, ọ na -agwakọta nke ọma ma na -enye njirimara dị ka ọnụ ahịa ahụ si dị. Anyị enyela IKEA SYMFONISK ohere ma anyị emeghachila.
Ihe na: 4 August 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 3 August 2021
Ngwakọta nke ọma na imewe, ika ụlọ ahụ
Ụda na -eju anya n'ike na ike
Ọnụahịa gbanwere nke ukwuu na ụdị ngwaọrụ
Enweghị igwe okwu maka Alexa
Enweghị eriri RJ45
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Igwe okwu ọkà okwu IKEA SYMFONISK, ụda ka mma yana imebe ya karịa [Nyocha]
Amazon na -emegharị olu olu Alexa anyị nwalere ya